Nagarik Shukrabar - २० वर्षदेखि दाँत नमाझ्दा
शुक्रबार, २९ कार्तिक २०७६, ११ : १५
२० वर्षदेखि दाँत नमाझ्दा
आइतबार, ०८ साउन २०७४, १२ : ४६ | शुक्रवार , Kathmandu
तपाईं हामीलाई एक दिन दाँत नमाझ्दा त सकसक लाग्छ । २१ वर्षे एक युवकले भने २० वर्षदेखि दाँत माझेका छैनन् भन्दा कस्तो लाग्ला ? बेलायती २१ वर्षे युवाले २० वर्षदेखि दाँत नमाझ्नुका साथै मुख कुल्ला नगरेको समाचार र यससँगै आएको भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल भएको छ । जेका अनुसार उनलाई घर परिवारका मानिसहरुले समेत दाँत माझ्नुपर्छ भनेर सुझाएनन् । परिवारबाटै सिक्न नपाएपछि उनले दाँत माझ्ने कुरा नै भएन । र, यही सानो कुराले उनी यतिबेला गहन दन्त उपचार गर्न बाध्य भएका छन् । दाँत बिग्रिएर उनी दन्तचिकित्सककोमा पुगेपछि नै यो कुरा बाहिर आएको हो । गत जनवरीमा उनी बेलायती रियालटी सो ‘इम्ब्रासिङ बडीज’मा समेत आएका थिए । तर मूलधारका मिडियाहरुले गत साता मात्र यो कुरा थाहा पाए र यो खबरले सनसनी मच्चाएको छ ।
दाँत बिग्रँदा समेत जे डेन्टिस्टकोमा जान हिच्किचाइरहेका थिए । भन्छन्, ‘म यसअघि कहिल्यै डेन्टिस्टकोमा गएको थिइनँ । मलाई निकै डर पनि लागिरहेको थियो ।’ उनको उपचारमा संलग्न डाक्टर जेम्स रसेलका अनुसार धेरै वर्षदेखि दाँत नमाझ्दा जेका दाँतमा टैटार र प्लेग बनिसकेको थियो । जेको दाँतका जरामा इन्फेक्सन नभएको भए पनि सडिसकेका उनका ११ दाँत भने फुकाल्नै पर्ने थियो । जेम्स भन्छन्, ‘कृत्रिम दाँत राख्नेभन्दा पनि अब उसको दैनिकीमा परिवर्तन गर्ने अवस्था थियो । उसले चिसो र कोला निकै पिउँदो रहेछ । उसले यी पेय पदार्थ छोडेन भने उसका दाँत अब दाँत रहँदैनन् ।’ साथै उनले जेलाई मिठाई र गुलिया चिज नखान सुझाएका छन् । डाक्टरको कुरा जेले आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने बताएका छन् । यसरी २० वर्षदेखि नमाझेका जे आजभोलि खानपान र दाँत माझ्न थालेदेखि उनका दाँतमा सुधार आएको छ ।
दुलहीको औँठीका लागि डकैती !
अमेरिकाको टेक्सस राज्यका एक दुलाहाले आफ्नो विवाह हुनु केही घण्टाअघि दुलहीले लगाउने औँठीको पैसा जोहो गर्न बैंकमा डकैती गरेका छन्।
गएको साता आयरल्यान्डमा उदेक भयो। चिहानमा गाडिएको मानिस चिच्याउन थाल्यो। यसपछि त केही मानिसहरुको भागाभाग भयो भने केही मानिसहरु चिहान खोतल्न थाले।